प्रकाशित मिति: 2015/09/25
सबैलाई अवगत छ, यहि असोज १५ गते शुक्रबार ट्रेकिङ व्यवसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)मा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुन गईरहेको छ । अहिलेभन्दा ठिक दुई वर्षअघि टानको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । दुई वर्षअगाडी एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस समर्थित व्यवसायीहरुको समर्थनमा हालको कार्यसमिति नेतृत्वमा पुगेको तथ्य कहिँ÷कसैबाट छिपेको छैन् ।
हुनत, व्यवसायीक संघसंस्थाहरुमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृतिप्रति यो पंतिकार विपक्षमा छ । यद्यपी, यो प्रवृतिलाई पूरापूर नकारेर जाने अवस्था अहिलेलाई देखिएको छैन् । हरेक संघसंस्थाहरुको नेतृत्वलाई सत्ता ठान्ने र सो सत्तामाथि जायज÷नाजायज कब्जा जमाउन खोज्ने आमप्रवृति तथा प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिसँग जोडिने हाम्रोजस्तो समाजका कारण राजनीतिक सक्रियताकै आधारमा नेतृत्व चयन हुने परिस्थिति सृजना भएको छ । विशेष गरी मुलुकमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको प्रार्दुभाव भएपछि अर्थात २०६२÷०६३ पछि यो प्रवृति झाङ्गिदै गयो र अहिले यसले विकराल रुप लिँदै छ । तसर्थ, हाल यो आमप्रवृति र परिस्थितिबाट कोही पनि अछुत रहन नसक्ने तथ्य जगजाहेर छ । अर्थात यसलाई यसरी बुझौँ, अधिकांश संघसंस्था आज यात ट्रेड युनियनहरुजस्तै बनेका छन् । अझै केही वर्ष संघसंस्थाहरुमाथि राजनीतिक दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरुको अधिपत्य कायम रहने छ । भलै, यस्तो प्रवृतिकाविरुद्वमा जबर्जस्त आवाज उठन थालिसकेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै अब सबैको ध्यान आर्थिक क्रान्तिको दिशामा अगाडी बढने संकेत भने मिलेको छ ।
अब टानकै प्रशंगतिर लागौँ, दुई वर्षअगाडी निर्वाचित टानको वर्तमान कार्यसमिति को कामकार्वाहीप्रति अहिले ब्यापक असन्तुष्टि झाङ्गिएको तथ्य घामझैँ छर्लङ्ग छ । निकै ठूलो स्रोत टानको अधिनमा भएको, तर आर्थिकलगायतका ति स्रोत परिचालन अपारदर्शी, अराजक र अनियमितताको पराकाष्ठा नाग्नेगरी गरिएको कुरा छताछुल्ल छ । संस्थाको नियमित स्रोत तथा दातृनिकायहरुबाट प्राप्त सहयोगलाई आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता र सम्भावित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्लज्ज रुपमा पोस्ने काम भएको कुरा व्यापक चर्चामा छ । दुई महिनादेखि नगद आयका लागि दिईने नगदी रसिदसमेत नछापी फोटोकपीबाट दिईने र त्यसभित्र लाखौँको चलखेल गरी टानलाई एउटा भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाउने जुन एउटा प्रपञ्च रचिएको छ, त्यो टानको भविश्यप्रतिको खेलवाडबाहेक केही हुन सक्दैन् । टानलाई पार्टीको कार्यालयजस्तो ठान्ने, संस्थाको स्रोतलाई पार्टीको स्रोतजस्तो ठान्ने प्रवृति हावी भैरहँदा सँगै गएका एमाओवादी प्रतिनिधिको के हैसियत रह्यो ? पदमा जानुभएका एकाध सदस्यहरुबाहेक मूल नेतृत्व उहि प्रवृतिको गोटी बन्ने र फेरी उसैको समर्थनमा आफू मूख्य पदमा निर्वाचित हुने सपना पालेर बसेको तथ्य आज बजारमा छताछुल्ल भएको छ । एमाओवादीसमेत टानभित्र भएका सबैखाले अनियमितताको मतियार भएको छ, विचार र व्यवहारमा काग्रेससँग लम्पसार परेको छ । उसले आफूलाई माओवादीको खोलभित्रको कांगे्रस सावित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा के स्वाभिमानी एमाओवादी पर्यटन व्यवसायीहरु मुकदर्शक बन्न सक्छन् ? एमाओवादी पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला समितिको समानान्तर अर्को कथित जिल्ला समिति माताहत र सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गरिएको एउटा एनजिओलाई पार्टी मानेर त्यसको नाममा कसैसँग छलफल नै नगरी आफैँ टिका लगाएर घोषणा गरिएको उम्मेद्वारलाई एमाओवादीको उम्मेद्वार मानेर स्वाभिमानी पर्यटन व्यवसायी सति जान्छन् ? मेरो विचारमा यो कुरा सम्भव छैन् । निश्चित समय मौका मिलाएर कुनै अमुक पार्टीमा प्रवेश गर्ने भित्री योजनाकासाथ (यस्तो काम नाट्टामा पनि भएको थियो) उतैबाट निर्देशित रुपमा टानको नेतृत्व लिन तम्सेकाहरुलाई कुनै पनि स्वाभिमानी एमाओवादी पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्नो उम्मेद्वारको रुपमा स्विकार गर्ने सम्भावनै छैन् ।
मलाई के विश्वास छ भने, टानमा अहिले सबैले परिवर्तन चाहेका छन् । टानभित्रको अस्तव्यस्तता, अराजकता र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी एउटा व्यवस्थित, सक्षम र कामकाजी टानमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छन् । प्रगतिशिल, स्वतन्त्र र व्यवसायीक हितको रक्षाका लागि कटीबद्ध नयाँ नेतृत्वको टान निर्माण गर्न चाहन्छन्, जो आम ट्रेकिङ व्यवसायीहरुको पक्षमा हरदम खडा होस् । नयाँ नेतृत्व नयाँ संविधान र त्यसले देखाएको आर्थिक क्रान्तिको बाटोलाई आत्मसात् गरी भूकम्पबाट थला परेको पर्यटनलाई माथी उठाउन दृढसंकल्प होस् । पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत् आम व्यवसायी, एमाओवादी समर्थित पर्यटन व्यवसायीहरु सबैको हित यसैमा छ ।